မြေနိမ့်ရာ လှံစိုက်တော့---- - Neoxian City
အကြောင်းအရာတစ်ခုတိုက်ဆိုင်တိုင်း ပြန်လည်သတိရကာ ရှေးဟောင်း နှောင်းဖြစ်၊ အဖြစ်အပျက်လေးများကို ပြန်လည်တူးဆွ ပြောတတ်ကြသည်။
ကျွန်တော့အနေနှင့် ပြန်လည်တူးဆွစရာ အတိတ်က ခြေရာများစွာရှိလေသဖြင့် မိတ်ဆွေများနှင့် ကြုံဆုံမိတိုင်း ရှေးဖြစ်ဟောင်း အောင့်မေ့ဖွယ် အချင်းချင်း ဖလှယ်ကာ ပြောဖြစ်ကြသည်။
ယနေ့နေ့လယ်ခင်းတွင် ကျွန်တော့၏ ရပ်ကွက်ထဲက မိတ်ဆွေတစ်ဦး အိမ်သို့ အလည်ရောက်ရှိလာ၍ ကျွန်တော့အတွက် စကားပြောဖော်ရရှိခဲ့သည်။ ထိုမိတ်ဆွေဆိုသည်မှာ အိမ်နီးနားချင်းတစ်ဦးပင်ဖြစ်သည်။ "အ"ချင်ယောင်ဆောင်သော ဦးကြင်ဆိုလျှင် စာရှုသူများ မှတ်မိကြမည်ထင်သည်။
လူကပ်လူပေကြီး ဦးကြင်သည် အရပ်ထဲတွင် အပေါင်းအသင်း သိပ်မရှိ။ သူ၏ ဘုကလန့်ပြောတတ်သောအကျင့်၊ ပေကပ်ပြောတတ်သောအကျင့်တို့ကြောင့် သူ့တွင် လက်ခံစကားပြောဖော်မရှိရှာချေ။ ထို့ကြောင့် အခွင့်အခါသင့်တိုင်းကျွန်တော့အိမ်သို့ လာရောက်လည်ပါတ်ကာ စကားစမည်များ ပြောတတ်ကြသည်။ ကျွန်တော်မှ သူ့အားနားလည်မှုပေးကာ သူ၏ ရင်တွင်းဖြစ်စကားများ တစ်ခါတစ်ရံပြောတတ်ကြသည်။
ယနေ့တော့ လူကပ်ကြီး ဦးကြင် မျက်နှာမှိုင်တွေချလျှက် ကျွန်တော့အိမ်သို့ ရောက်လာသည်။ ကျွန်တော်မှ ရေနွေးကြမ်း၊ ပဲကြမ်းသုပ်နှင့် ဧည့်ခံလိုက်သည်။ "ဦးကြင်ကြီး မျက်နှာမကောင်းပါလား ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ၊ နေမကောင်းဘူးလား။" ကျွန်တော်မှ စကားစပေးလိုက်သည်။
"နေကောင်းပါတယ်ဗျာ ဒီနေ့ စိတ်နေမကောင်းတာဗျ" "အင်းဗျာ ဘာတွေများ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာတုန်း"။ "အင်းဆရာလေးမေးတော့လဲ ပြောချင်နေတာနဲ့အတော်ပဲ" "ဒီလိုဗျာ ကျွန်တော့မှာ အသိမိတ်ဆွေက နဲတော့ ရင်ဖွင့်စရာ လူက မရှိသကိုးဗျာ၊ ဆရာလေးကသာ ကျွန်တော့အပေါ် နားလည်ခံစားပေးတတ်တော့ ခင်ဗျားဆီလာခဲ့ရတာပေါ့ဗျ"။
"ကဲ-ကောင်းပါပီ ဦးကြင်ရယ် ရင်ဖွင့်ချင်လဲ ဖွင့်ချလိုက် မြုံမထားနဲ့ဗျ။" "အဖြစ်က ဒီလိုဗျ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပါတ်လောက်က ကျွန်တော်တို့မိသားစု စားဝတ်နေရေးအဆင်မပြေတော့လို့ အခုနေနေတဲ့ အိမ်ခြံဝင်းလေး တစ်ခြမ်းကို ကန့်ပီး အပေါင်ထားလိုက်တယ်ဗျာ" "ခေတ်ကာလကလည်းမကောင်း၊ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းကလည်းမရှိဆိုတော့ ခုလိုလုပ်လိုက်ရတောပေါ့ဗျာ"။
"အဲဒါဗျာ မနေ့က အိမ်ခြံဝင်းပွဲစားက ကျွန်တော်တို့ ခြံဝင်းက ဂရံမြေစာရင်းအင်း မပြည့်စုံလို့ အပေါင်ထားတာကို လက်မခံနိုင်ကြောင်း သူတို့ငွေပြန်ပေးရမယ်လို့ အိမ်လာပြောတယ်ဗျာ"။ "ဟာ - ဘယ်လိုကြောင့် အစကတဲက မပြောပဲ အခုမှ စာရွက်စာတမ်း မပြည့်စုံလို့ဆိုပီးငွေပြန်တောင်းရသလားဗျာ၊ မဟုတ်သေးပါဘူး သူတို့လုပ်ပုံက"။ "ဟုတ်ပ ဆရာလေးရယ် ခုလိုခေတ်ပျက်ကြီးထဲ မသူတော် ပိုက်ဆံရှိသူတွေက သူဆင်းရဲတွေကို အနိုင်ကျင့်နေကြတာပေါ့ဗျာ"။
"ခုချိန်မှာ တရားတပေါင်ရင်ဆိုင်ဘို့ကလဲ မဖြစ်နိုင်၊ သူ့ငွေပြန်ပေးရအောင်ကလည်း ကျုပ်တို့က သုံးပီးနေတာ သုံးပုံတစ်ပုံလောက်ကုန်သွားပီဗျ" "အဲဒါဆရာလေးက အသိမိတ်ဆွေပေါတော့ နည်းလမ်းကောင်းလေးများ ရှိရင် သင်ပြပေးပါအုန်းဗျာ"။
ခေတ်ပျက်မှာ သူဌေးဖြစ်ဆိုသည့် စကားရှိသည့်အတိုင်း ခုချိန်ခါသည် ပိုက်ဆံဝါလားများက အခက်အခဲရှိနေသူ သူဆင်းရဲတို့အား အကွက်ချ၍ ပစ္စည်းဥစ္စာများ မတရားသဖြင့် အပိုင်သိမ်းလိုသော လုပ်ရပ်များ တွင်တွင်ကြီးဖြစ်၍နေသည်။ မကြေနပ်၍ တိုင်စရာ ရဲဌာနကလည်း နတ္ထိ၊ တရားရင်ဆိုင်မလားဆိုတော့ တရားမဏ္ဍိုင်က ပျက်လင့်နေပီဖြစ်သည်။
ဦးကြင်အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်။ သို့နှင့် "ကျွန်တော့်အသိမိတ်ဆွေများထဲက နားလည်တတ်ကြွမ်းသူ မေးမြန်းရှာကြည့်ပါအုန်းမယ်၊ ဒေါသရှေ့မထားပဲ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ဟိုလူတွေကို ခဏအချိန်ဆွဲထားအုန်းဗျနော် ဦးကြင် ကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက် ဖေးမကူညီပါ့မယ်ဗျာ"။ ကျွန်တော့်စကားကြားလိုက်တော့ ဦးကြင်မျက်နှာ လင်းလက်လာသည်။ မျှော်လင့်ချက်သေးသေးလေးရှိရင်တောင် လူသားတို့အားမာန် တဖန်ပြန်ပြည့်လာတတ်သည်မဟုတ်လား။
သို့နှင့် ထိုနေ့လေးသည် ဦးကြင်နှင့် စကားပြောရင်းအချိန်တို့သည် ညနေစောင်းသွားလေတော့သည်။ ဦးကြင်လည်း သူ့အိမ်ပြန်သွားပြီ ဖြစ်သည်။ နေရာမှမထပဲ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း အတွေးနယ်ကျွံနေမိသည်။
"မြေနိမ့်ရာ လှံစိုက်တော့ ဒီလှံကို ဘယ်သူလာနှုတ်ပေးမှာတုန်း" လို့တွေးရင်း---။
မြန်မာဟိုက်အဖွဲ့သားများ အခက်အခဲများမှ ကျော်ဖြတ်နိုင်ကြပါစေ။
hive-122133 proofofbrain trafficinsider neoxian palnet archon ocd blog writing literature
အော ဒီခေတ်ပျက်မှာ အနုနည်းနဲ့ ဓါးပြတိုက်တာပဲ တောကြောင်တစ်မျိုးပေါ့။ !PIZZA
ဟုတ်တယ်ဗျာ ခေတ်ကပျက်နေတာဆိုတော့-- !LOLZ
It’s fine he woke up.
@nyinyiwin, I sent you an $LOLZ on behalf of @nyimwa
PIZZA! PIZZA! PIZZA! PIZZA!
htwegyi tipped nyimwa (x1)
kachinhenry tipped nyimwa (x1)
nyinyiwin tipped nyimwa (x1)
@uthantzin(8/9) tipped @nyimwa (x1)
Your content has been boosted with Ecency Points, by @nyimwa.
ခေတ်ပျက်မှာ အကြောင်းပြုတဲ့ မကောင်းမှုတွေပါလေ။
ကြားရတာ နားမချမ်းသာ လိုက်တာ..!PIZZA.
ဟုတ်တယ်ဗျာ ဒီလိုအချိန် ဒီလိုလူမျိုးတွေ ဆိုးရွားနေကြတာ။ !LOLZ
Why didn’t the mathematician travel?
He could never reach the city limit.
@kachinhenry, I sent you an $LOLZ on behalf of @nyimwa
Use the !LOL or !LOLZ command to shareajoke and an $LOLZ. (4/4)
ဟုတ်ပ ဗျာ ဒီအချိန်ဆိုတော့ မတရားလိုချင်သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးအချိန် ဖြစ်တောပေါ့ဗျာ...!PIZZA
သူတို့ အကွက်ထဲ ဝင်သလိုဖြစ်နေတာလေ။
Congratulations @nyimwa! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):
You made more than 400 comments.
Your next target is to reach 500 comments.